ဘာကြောင့် ဆရာက အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို အတန်းထဲမှာ အသုံးပြုခိုင်းတာလဲ? - Myanmar Network
ဘာကြောင့် ဆရာက အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို အတန်းထဲမှာ အသုံးပြုခိုင်းတာလဲ?
Posted by Soe Soe Win on June 5, 2014 at 9:40 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
တစ်ဘာသာသုံး အဘိဓာန်ကို အသုံးပြုရတာ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အသုံးပြုနည်းကို သင့်ဆရာ က လေ့ကျင့်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် အောက်မှာ ဖော်ပြမဲ့အကြောင်း တွေက သင်နဲ့ သင့်အတန်းအတွက် မှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာ့စကားကို နားထောင်ပြီး အဘိဓာန်သုံးဖို့ အထူးအားထုတ်သင့်ပါတယ်။
အတန်းထဲမှာ အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို သုံးသင့်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို စပြီး အသုံးပြုရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းဟာ သင့်ကို အတန်းထဲမှာ အင်္ဂလိပ် စကားပဲ အသုံးပြုဖို့ ဆရာက အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းရတဲ့အကြောင်း အရင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဦးနှောက်ထဲက မိခင် ဘာသာစကားကို အတန်းထဲမှာ ဖျောက်ထားမယ် ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို တွေးတတ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို နားလည်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေတဲ့ အပြင် အရေးနဲ့အပြောကိုပါ လျင်လျင်မြန်မြန် တိုးတက်လာ စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဘာသာတည်းသုံးတဲ့ အဘိဓာန်ကို အသုံးပြုတာဟာ စာကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖတ်ရတာဖြစ်ပြီး ကိုယ့် မိခင် ဘာသာစကားကို အသုံးမပြုရုံသာမက အဘိဓာန်ပါ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို သင့်မှတ်စုစာအုပ်ထဲကိုပါ ကူး ထည့်နိုင်တဲ့အတွက် အတန်းပြင်ပမှာ အင်္ဂလိပ်စာကို ပိုပြီး အသုံးပြုလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခက်ခဲတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတစ်လုံးကို အဘိဓာန်ထဲမှာရှာတဲ့အခါ သူတို့နားမလည်တဲ့ အခြားခက်ခဲတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးနဲ့ ရှင်းပြတာ တွေ့ရမှာကို ကျောင်းသားအများစုက စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ အဘိဓာန်ကို အသုံးပြု ရင်တော့ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေ တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ Elementary Learner's Dictionary လိုမျိုး ပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့ အဘိဓာန်ကို ပြောင်းပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
သင့်တော်တဲ့ အဘိဓာန်ကို ပြောင်းပြီး အသုံးပြုနေတဲ့ကြားက တစ်ခါတရံ အဲဒီလိုဆက်ဖြစ်နေသေး တယ်ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ထဲက သင်မသိ တဲ့ စကားလုံးဟာ အလွန်အသုံးဝင်ပြီး အဲဒီစကားလုံးကို ကျက် မှတ်ရတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို နှစ်ခါပြန်လေ့ကျင့်မှု ကို ရရှိနေပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်တွေဟာ အဆင့်အမျိုးမျိုးအလိုက် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Intermediate Learner's Dictionary ကို အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ ပြဌာန်းစာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ရတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးလုံး ဟာ အဘိဓာန်ထဲမှာ မရှိဘူးဆိုရင် လက်ရှိရောက်နေတဲ့ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်မှာ အဲဒီစကားလုံးဟာ သင်ယူရ လောက်အောင် အရေးမကြီးဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာ ဖြစ်လို့ အဲဒီစကားလုံးကို လစ်လျူရှုလိုက်နိုင်ပါတယ်။
Photo credit - http://ltprofessionals.com
သင် ဖတ်နေတဲ့ ဆောင်းပါးထဲက စကားလုံးအများစုဟာ သင့် အဆင့်အဘိဓာန်ထဲမှာ မပါဘူးဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါးဟာ သင့်အတွက် ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေလို့ပါပဲ။ ဒါ ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အဲဒီ ဆောင်းပါးအစား အဆင့်သတ်မှတ် ထားတဲ့စာအုပ် (Graded Reader) ကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ နှစ်ဘာသာသုံးအဘိဓာန်တွေကျတော့ ဒီလိုအဆင့်လိုက် သတ် မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။
၄။ ဘာသာပြန်ထားခြင်းမရှိသော စကားလုံးများ
ကျောင်းသားတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ နောက်ပြဿနာတစ်ခု ဝေါဟာရတစ်လုံးရဲ့ အင်္ဂလိပ် လို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ် ချက်ကို နားလည်ပေမဲ့ အဲဒီစကားလုံးနဲ့ ညီမျှတဲ့ စကားလုံးကို မိခင် ဘာသာစကားမှာ ရှာမတွေ့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ နှစ်ဘာသာသုံးအဘိဓာန်မှာ ရှာကြည့်ကြပါတယ်။
ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ ပေးထားတဲ့ ဘာသာပြန် ထားတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ မူရင်း အင်္ဂလိပ် စကားလုံးတွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မတူကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် စကားလုံး တစ်လုံး တည်းက ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး မှာ အကောင်းသဘောရော၊ မကောင်းသဘောရော ဖော်ပြပြီး ကွဲပြားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေရှိတဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာ (personality)ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရ တွေမှာ ပိုပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးရဲ့ တကယ့်အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဘာလဲ ဆိုတာကို သင်ယူနေတဲ့ အခြေ အနေမျိုးမှာ ဘာသာ မပြန်တာက ပိုပြီးအထောက်အပံ့ ဖြစ်စေ ပါတယ်။
တချို့သော ကျောင်းသားများက အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်ဘိဓာန်မှာပါတဲ့ "noun" နဲ့ "adverb" လိုမျိုး စကားလုံးတွေက ဝေါ ဟာရတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို နားလည်ဖို့ ခက်ခဲစေတယ်လို့ ညည်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် ဘာသာစကားကို မသုံးပဲ အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ ဆိုရင် ဒီစကားလုံးတွေက လိုအပ်ပါတယ်။
သဒ္ဒါဝေါဟာရတွေ ကို သင်ယူဖို့ဆိုရင် အဘိဓာန်ဟာ အလွန်ကောင်းတဲ့စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အဘိဓာန်ထဲမှာ စကားလုံးတစ်လုံးကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖော်ပြထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေါဟာရအသစ်တစ်လုံးကို သင်ယူတဲ့အခါတိုင်း ဒီစကားလုံးတွေ (သို့) ဒီစကားလုံးတွေရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်တဲ့ 'n' (သို့) 'adv' ကို ကူးယူမယ်ဆိုရင် အဲဒီစကားလုံးကို ပိုပြီး ကောင်းကောင်းသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သဒ္ဒါ ဝေါဟာရတွေကိုပါ သင်ယူပြီးဖြစ်ပါမယ်။
ဒီစကားလုံးတွေကို သိထားတာက သင့်ဘာသာစကားကို မတတ်တဲ့သူတစ်ဦးတစ် ယောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ အထောက် အကူဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- နိုင်ငံခြားကို ပညာ သွား သင်တဲ့အခါမျိုးပေါ့။
အင်္ဂလိပ် - အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ဟာ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို သင်ယူနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် နှစ်ဘာသာသုံး အဘိ ဓာန်အများစုက ချန်ခဲ့တဲ့ အချက်အလက်အပိုတွေ အများကြီး ပါ ပါတယ်။ချန်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ အသုံးများတဲ့ စကားလုံးများ၊ အများအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးလေ့၊ မှားလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးများနဲ့ အသံထွက်အတွက် အသံထွက် သင်္ကေတ(phonemic script)တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်ဘာသာစကားကို မပြောတတ်တဲ့ ဆရာက သင်ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရ၊ မရကို စစ်ဆေးလိုတဲ့အခါ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက တော့ အင်္ဂလိပ်လို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးတာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
တချို့သော ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေက တစ်ဘာသာသုံး အဘိဓာန်ကို အသုံးပြုရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါတတ်ပါတယ်။
၉။ ဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းပြတတ်
သင့်အနေနဲ့ သင်ပြောချင်တာကို ရှင်းပြဖို့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအောင် သင်ယူပါ။ ရှာမတွေ့ဘဲ တခြားနည်းတွေနဲ့ ရှင်းပြရတဲ့အခါ အဘိဓာန်တစ်အုပ်က ဝေါဟာရတစ်လုံးကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကား (simple English)နဲ့ ရှင်းပြသလိုမျိုးပဲ ပြုလုပ်ဖို့လိုပါ မယ်။ အဘိဓာန်ပါ ရှင်းပြချက်မျိုးတွေကို ဖတ်တဲ့အတွက် သင် ရှင်းလင်းချက်ပေးရတဲ့အခါမှာ လွယ်ကူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- "I can't think of the word, but it'sakind of…." ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ အဘိဓာန်အသုံးပြုခြင်းကို လျော့ချပါ။
နှစ်ဘာသာသုံးအဘိဓာန်ကို အသုံးပြုတာထက် အင်္ဂလိပ် - အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို အသုံးပြုတာက အချိန်ပိုယူရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်နစ်အဘိဓာန်ဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒီလို အချိန်ပိုယူရတာက ဆရာသင်တာကို နားထောင်နေသင့် တဲ့အခါမျိုးနဲ့ စကားစပ်အရ စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မှန်းကြည့်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျောင်းသားတွေကို အဘိဓာန် ခဏခဏ သုံးတာကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။
ဆရာက ညွှန်းထားတဲ့ ကျောင်းသားသုံး အင်္ဂလိပ် - အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကောင်းတစ်အုပ်ကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် နှစ်ဘာသာသုံး အဘိဓာန် (အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်နစ် အဘိဓာန်) တွေမှာရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရှောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြဿနာတွေကတော့ အသုံးမ၀င်တဲ့ စကား လုံးများ၊ ခေတ်ကုန်သွားပြီး ဘယ်သူမှ မသုံး တော့တဲ့ စကားလုံးများ အများအပြားပါဝင်ပြီး စကားလုံးတိုင်း အတွက် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ မပါခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါ တယ်။
နှစ်ဘာသာသုံး အဘိဓာန်ကို အတန်းထဲမှာ အသုံးပြုရသောအကြောင်းရင်းများ
တစ်ခါတရံကျတော့ နှစ်ဘာသာသုံးအဘိဓာန်(bilingual dictionary)က ပိုပြီး အသုံးတည့်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့ ဆရာ့ကို မရမရက တောင်းဆိုပါ။
ဥပမာအားဖြင့် - သင့် ဘာသာစကားနဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို သိပေမဲ့ ရှင်းလင်းမပြတတ် (သို့) ပုံဆွဲမပြတတ်တဲ့ ဝေါဟာရတစ်လုံးကို ရှာဖွေတဲ့အခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ဖြေရှင်းပြလို့မရနိုင်တဲ့အထဲမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အခြားအပင်တွေ၊ ငါးနဲ့အခြားတိရစ္ဆာန်တွေပါ,ပါတယ်။
သင်ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကို တတ်နိုင်သလောက် အကြိမ်များများကြိုးစားပြီး အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကို ဆရာက သိနေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါတရံမှာ သင့်အနေနဲ့ နှစ်ဘာသာသုံး အဘိဓာန်ကို အသုံးပြုမှပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ပြောပြရင် သူ့အနေနဲ့ သင့်ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ ခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဈဘာသာသုံး အဘိဓာနျကို အသုံးပွုရတာ ခကျခဲတဲ့အလုပျဖွဈနိုငျပါတယျ။ အင်ျဂလိပျ-အင်ျဂလိပျအဘိဓာနျအသုံးပွုနညျးကို သငျ့ဆရာ က လကေ့ငျြ့ပေးရတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အောကျမှာ ဖျောပွမဲ့အကွောငျး တှကေ သငျနဲ့ သငျ့အတနျးအတှကျ မှနျနတေယျဆိုရငျတော့ ဆရာ့စကားကို နားထောငျပွီး အဘိဓာနျသုံးဖို့ အထူးအားထုတျသငျ့ပါတယျ။
အတနျးထဲမှာ အင်ျဂလိပျ-အင်ျဂလိပျအဘိဓာနျကို သုံးသငျ့တဲ့အကွောငျးရငျးမြား
အင်ျဂလိပျ-အင်ျဂလိပျအဘိဓာနျကို စပွီး အသုံးပွုရတဲ့ အဓိက အကွောငျးရငျးဟာ သငျ့ကို အတနျးထဲမှာ အင်ျဂလိပျ စကားပဲ အသုံးပွုဖို့ ဆရာက အတငျးအကပျြတိုကျတှနျးရတဲ့အကွောငျး အရငျးနဲ့အတူတူပဲဖွဈပါတယျ။
သငျ့ဦးနှောကျထဲက မိခငျ ဘာသာစကားကို အတနျးထဲမှာ ဖြောကျထားမယျ ဆိုရငျ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အင်ျဂလိပျလို တှေးတတျလာမှာဖွဈတဲ့အတှကျ သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစကားကို နားလညျနိုငျစှမျးကို တိုးတကျစတေဲ့ အပွငျ အရေးနဲ့အပွောကိုပါ လငျြလငျြမွနျမွနျ တိုးတကျလာ စမှော ဖွဈပါတယျ။
တဈဘာသာတညျးသုံးတဲ့ အဘိဓာနျကို အသုံးပွုတာဟာ စာကို အင်ျဂလိပျလိုပဲဖတျရတာဖွဈပွီး ကိုယျ့ မိခငျ ဘာသာစကားကို အသုံးမပွုရုံသာမက အဘိဓာနျပါ အဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြကို သငျ့မှတျစုစာအုပျထဲကိုပါ ကူး ထညျ့နိုငျတဲ့အတှကျ အတနျးပွငျပမှာ အင်ျဂလိပျစာကို ပိုပွီး အသုံးပွုလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခကျခဲတဲ့ အင်ျဂလိပျဝေါဟာရတဈလုံးကို အဘိဓာနျထဲမှာရှာတဲ့အခါ သူတို့နားမလညျတဲ့ အခွားခကျခဲတဲ့ စကားလုံး တဈလုံးနဲ့ ရှငျးပွတာ တှရေ့မှာကို ကြောငျးသားအမြားစုက စိုးရိမျကွပါတယျ။ သငျ့တျောတဲ့ အဘိဓာနျကို အသုံးပွု ရငျတော့ အဲဒီလိုဖွဈခဲပါတယျ။ အဲဒီလို တဈခြိနျလုံးဖွဈနေ တယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ Elementary Learner's Dictionary လိုမြိုး ပိုပွီးလှယျကူတဲ့ အဘိဓာနျကို ပွောငျးပွီး အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။
သငျ့တျောတဲ့ အဘိဓာနျကို ပွောငျးပွီး အသုံးပွုနတေဲ့ကွားက တဈခါတရံ အဲဒီလိုဆကျဖွဈနသေေး တယျဆိုရငျတော့ အဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြထဲက သငျမသိ တဲ့ စကားလုံးဟာ အလှနျအသုံးဝငျပွီး အဲဒီစကားလုံးကို ကကျြ မှတျရတဲ့အတှကျ အင်ျဂလိပျစာကို နှဈခါပွနျလကေ့ငျြ့မှု ကို ရရှိနပေါတယျ။
အထကျမှာပွောခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲ အင်ျဂလိပျ-အင်ျဂလိပျအဘိဓာနျတှဟော အဆငျ့အမြိုးမြိုးအလိုကျ ရရှိနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ - Intermediate Learner's Dictionary ကို အသုံးပွုတဲ့ အခါမှာ ပွဌာနျးစာအုပျထဲမှာ ဖတျရတဲ့ စကားလုံး တဈလုံးလုံး ဟာ အဘိဓာနျထဲမှာ မရှိဘူးဆိုရငျ လကျရှိရောကျနတေဲ့ သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစာအဆငျ့မှာ အဲဒီစကားလုံးဟာ သငျယူရ လောကျအောငျ အရေးမကွီးဘူးဆိုတာကို ဖျောပွနတော ဖွဈလို့ အဲဒီစကားလုံးကို လဈလြူရှုလိုကျနိုငျပါတယျ။
သငျ ဖတျနတေဲ့ ဆောငျးပါးထဲက စကားလုံးအမြားစုဟာ သငျ့ အဆငျ့အဘိဓာနျထဲမှာ မပါဘူးဆိုရငျလညျး ဒါဟာ ကောငျးတဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီဆောငျးပါးဟာ သငျ့အတှကျ ခကျခဲတယျဆိုတာကို ဖျောပွနလေို့ပါပဲ။ ဒါ ကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ အဲဒီ ဆောငျးပါးအစား အဆငျ့သတျမှတျ ထားတဲ့စာအုပျ (Graded Reader) ကို ဖတျသငျ့ပါတယျ။ နှဈဘာသာသုံးအဘိဓာနျတှကေတြော့ ဒီလိုအဆငျ့လိုကျ သတျ မှတျထားတာ မရှိပါဘူး။
၄။ ဘာသာပွနျထားခွငျးမရှိသော စကားလုံးမြား
ကြောငျးသားတှေ ကွုံတှရေ့တဲ့ နောကျပွဿနာတဈခု ဝေါဟာရတဈလုံးရဲ့ အင်ျဂလိပျ လို အဓိပ်ပါယျသတျမှတျ ခကျြကို နားလညျပမေဲ့ အဲဒီစကားလုံးနဲ့ ညီမြှတဲ့ စကားလုံးကို မိခငျ ဘာသာစကားမှာ ရှာမတှတေ့ာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ဟာ နှဈဘာသာသုံးအဘိဓာနျမှာ ရှာကွညျ့ကွပါတယျ။
ပုံမှနျ အားဖွငျ့တော့ မိခငျဘာသာစကားနဲ့ ပေးထားတဲ့ ဘာသာပွနျ ထားတဲ့ စကားလုံးတှဟော မူရငျး အင်ျဂလိပျ စကားလုံးတှနေဲ့ အဓိပ်ပါယျမတူကွပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ စကားလုံး တဈလုံး တညျးက ဘာသာစကားအမြိုးမြိုး မှာ အကောငျးသဘောရော၊ မကောငျးသဘောရော ဖျောပွပွီး ကှဲပွားတဲ့ အဓိပ်ပါယျတှရှေိတဲ့ ပငျကိုယျစရိုကျလက်ခဏာ (personality)ဆိုငျရာ ဝေါဟာရ တှမှော ပိုပွီးဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး အင်ျဂလိပျစကားလုံးရဲ့ တကယျ့အဓိပ်ပါယျဟာ ဘာလဲ ဆိုတာကို သငျယူနတေဲ့ အခွေ အနမြေိုးမှာ ဘာသာ မပွနျတာက ပိုပွီးအထောကျအပံ့ ဖွဈစေ ပါတယျ။
တခြို့သော ကြောငျးသားမြားက အင်ျဂလိပျ-အင်ျဂလိပျဘိဓာနျမှာပါတဲ့ "noun" နဲ့ "adverb" လိုမြိုး စကားလုံးတှကေ ဝေါ ဟာရတဈလုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြကို နားလညျဖို့ ခကျခဲစတေယျလို့ ညညျးတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ ဘာသာစကားကို မသုံးပဲ အင်ျဂလိပျစာကို လလေ့ာသငျယူနိုငျဖို့ ဆိုရငျ ဒီစကားလုံးတှကေ လိုအပျပါတယျ။
သဒ်ဒါဝေါဟာရတှေ ကို သငျယူဖို့ဆိုရငျ အဘိဓာနျဟာ အလှနျကောငျးတဲ့စာအုပျ ဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ အဘိဓာနျထဲမှာ စကားလုံးတဈလုံးကို အကွိမျပေါငျးမြားစှာ ဖျောပွထားလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝေါဟာရအသဈတဈလုံးကို သငျယူတဲ့အခါတိုငျး ဒီစကားလုံးတှေ (သို့) ဒီစကားလုံးတှရေဲ့ အတိုကောကျဖွဈတဲ့ 'n' (သို့) 'adv' ကို ကူးယူမယျဆိုရငျ အဲဒီစကားလုံးကို ပိုပွီး ကောငျးကောငျးသငျယူနိုငျမှာဖွဈပွီး တဈခြိနျတညျးမှာပဲ သဒ်ဒါ ဝေါဟာရတှကေိုပါ သငျယူပွီးဖွဈပါမယျ။
ဒီစကားလုံးတှကေို သိထားတာက သငျ့ဘာသာစကားကို မတတျတဲ့သူတဈဦးတဈ ယောကျနဲ့ အင်ျဂလိပျစာကို ဆှေးနှေးတဲ့အခါမှာ အထောကျ အကူဖွဈစမှော ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ- နိုငျငံခွားကို ပညာ သှား သငျတဲ့အခါမြိုးပေါ့။
အင်ျဂလိပျ - အင်ျဂလိပျအဘိဓာနျဟာ နိုငျငံခွားဘာသာစကားကို သငျယူနတေဲ့ လူတဈယောကျအတှကျ နှဈဘာသာသုံး အဘိ ဓာနျအမြားစုက ခနျြခဲ့တဲ့ အခကျြအလကျအပိုတှေ အမြားကွီး ပါ ပါတယျ။ခနျြခဲ့တဲ့ စကားလုံးတှထေဲမှာ အင်ျဂလိပျဘာသာမှာ အသုံးမြားတဲ့ စကားလုံးမြား၊ အမြားအားဖွငျ့ ရှုပျထှေးလေ့၊ မှားလရှေိ့တဲ့ စကားလုံးမြားနဲ့ အသံထှကျအတှကျ အသံထှကျ သင်ျကတေ(phonemic script)တို့ပါဝငျပါတယျ။
အကယျ၍ သငျ့ဘာသာစကားကို မပွောတတျတဲ့ ဆရာက သငျဟာ အင်ျဂလိပျစကားလုံးတဈလုံးရဲ့ တိကတြဲ့ အဓိပ်ပါယျရ၊ မရကို စဈဆေးလိုတဲ့အခါ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးက တော့ အင်ျဂလိပျလို အဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြကို ကွညျ့ပွီး စဈဆေးတာပဲ ဖွဈပါသညျ။
တခြို့သော ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျတှကေ တဈဘာသာသုံး အဘိဓာနျကို အသုံးပွုရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှပေါတတျပါတယျ။
၉။ ဘာသာစကားကို အင်ျဂလိပျလို ရှငျးပွတတျ
သငျ့အနနေဲ့ သငျပွောခငျြတာကို ရှငျးပွဖို့ အင်ျဂလိပျစကားလုံးအောငျ သငျယူပါ။ ရှာမတှဘေဲ့ တခွားနညျးတှနေဲ့ ရှငျးပွရတဲ့အခါ အဘိဓာနျတဈအုပျက ဝေါဟာရတဈလုံးကို ရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ အင်ျဂလိပျ စကား (simple English)နဲ့ ရှငျးပွသလိုမြိုးပဲ ပွုလုပျဖို့လိုပါ မယျ။ အဘိဓာနျပါ ရှငျးပွခကျြမြိုးတှကေို ဖတျတဲ့အတှကျ သငျ ရှငျးလငျးခကျြပေးရတဲ့အခါမှာ လှယျကူမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ- "I can't think of the word, but it'sakind of…." ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးမြိုး ဖွဈပါတယျ။
၁၀။ အဘိဓာနျအသုံးပွုခွငျးကို လြော့ခပြါ။
နှဈဘာသာသုံးအဘိဓာနျကို အသုံးပွုတာထကျ အင်ျဂလိပျ - အင်ျဂလိပျအဘိဓာနျကို အသုံးပွုတာက အခြိနျပိုယူရပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အီလကျထရှနျနဈအဘိဓာနျဆို ပိုဆိုးပါတယျ။ ဒီလို အခြိနျပိုယူရတာက ဆရာသငျတာကို နားထောငျနသေငျ့ တဲ့အခါမြိုးနဲ့ စကားစပျအရ စကားလုံးတဈလုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို မှနျးကွညျ့နရေတဲ့အခါမြိုးမှာ ကြောငျးသားတှကေို အဘိဓာနျ ခဏခဏ သုံးတာကို ဟနျ့တားနိုငျတဲ့အကွောငျးတဈခု ဖွဈပါ တယျ။
ဆရာက ညှနျးထားတဲ့ ကြောငျးသားသုံး အင်ျဂလိပျ - အင်ျဂလိပျအဘိဓာနျကောငျးတဈအုပျကို အသုံးပွုတဲ့အတှကျ နှဈဘာသာသုံး အဘိဓာနျ (အထူးသဖွငျ့ အီလကျထရှနျနဈ အဘိဓာနျ) တှမှောရှိတဲ့ ပွဿနာတှကေို ရှောငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီပွဿနာတှကေတော့ အသုံးမဝငျတဲ့ စကား လုံးမြား၊ ခတျေကုနျသှားပွီး ဘယျသူမှ မသုံး တော့တဲ့ စကားလုံးမြား အမြားအပွားပါဝငျပွီး စကားလုံးတိုငျး အတှကျ အဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြမြား မပါခွငျးတို့ပဲဖွဈပါ တယျ။
နှဈဘာသာသုံး အဘိဓာနျကို အတနျးထဲမှာ အသုံးပွုရသောအကွောငျးရငျးမြား
တဈခါတရံကတြော့ နှဈဘာသာသုံးအဘိဓာနျ(bilingual dictionary)က ပိုပွီး အသုံးတညျ့တဲ့အခါမြိုးလညျးရှိတတျပါတယျ။ အဲဒီအခါကရြငျ အသုံးပွုခှငျ့ပေးဖို့ ဆရာ့ကို မရမရက တောငျးဆိုပါ။
ဥပမာအားဖွငျ့ - သငျ့ ဘာသာစကားနဲ့ အချေါအဝျေါကို သိပမေဲ့ ရှငျးလငျးမပွတတျ (သို့) ပုံဆှဲမပွတတျတဲ့ ဝေါဟာရတဈလုံးကို ရှာဖှတေဲ့အခါမြိုးဖွဈပါတယျ။ အင်ျဂလိပျလို ဖွရှေငျးပွလို့မရနိုငျတဲ့အထဲမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ အခွားအပငျတှေ၊ ငါးနဲ့အခွားတိရစ်ဆာနျတှပေါ,ပါတယျ။
သငျဟာ အင်ျဂလိပျစကားကို တတျနိုငျသလောကျ အကွိမျမြားမြားကွိုးစားပွီး အသုံးပွုနတေယျဆိုတာကို ဆရာက သိနတေယျဆိုရငျတော့ တဈခါတရံမှာ သငျ့အနနေဲ့ နှဈဘာသာသုံး အဘိဓာနျကို အသုံးပွုမှပဲ ဖွဈမယျဆိုတာကို ပွောပွရငျ သူ့အနနေဲ့ သငျ့ကို ယုံကွညျစှာနဲ့ ခှငျ့ပွုမှာ ဖွဈပါတယျ။
UsingEnglish.com မှ Alex Case ၏ Why does my teacher make me use an English-English dictionary in class? မှ ကောကျနှုတျ ဘာသာပွနျဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။
UsingEnglish.com မှ Alex Case ၏ Why does my teacher make me use an English-English dictionary in class? မှ ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by nainglinntun on June 5, 2014 at 10:32
I love Oxford Ditionary Eng to Eng!
Permalink Reply by Myo Min Oo on June 5, 2014 at 16:34
Thank you sir, for your advice
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 15, 2015 at 12:55
i like is oxford university dictionary eng to eng.
Permalink Reply by Than Htwe on June 24, 2015 at 7:20
I use Oxford Advanced Learner's Dictionary